Fankalazana ny Krismasy 2020 | Primature
Mahazoarivo, ny 24 desambra 2020 – Nankalaza ny Krismasy 2020 teto Mahazoarivo niaraka tamin’ny Lehiben’ny governemanta, Ntsay Chrisitan, ny fianakaviamben’ny Primatiora.
Tamin-kafaliana tokoa no nandraisan’ny Praiminisitra fitenenana, nitondrany firarian-tsoa ho an’ny mpiasa rehetra eo ambany fiadidiany, sy ny fianakavian’izy ireo avy. Nankasitraka ny fiarahabana sy firarian-tsoa natao taminy ny Praiminisitra, ary notsiahiviny fa nandalo fotoan-tsarotra sy niaina fangirifiriana ny firenena tao anatin’ny sivy volana, niatrika ny ady tamin’ny valanaretina covid-19: “tsy mora raha tarafina ny zavatra niainantsika tao anaty fihibohana”, nefa toy ny any amin’ny firenena rehetra eran-tany dia mbola mitohy hatrany izany ady izany, ka tohizana araka izany ny fampiharana ireo fepetra ara-pahasalamana teo aloha, izay tsy maintsy hanohizan’ny ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka ny ezaka efa natao, mba hahafahana mifehy ny mety ho fivoaran’izany valanaretina izany any amin’ny fiarahamonina sy ny toerana hafa. Mitohy eo anivon’ny governemanta iray manontolo ihany koa ny ezaka eo amin’ny fijerena ny tena mahomby amin’izay ady izay, amin’ny alalan’ny fitadiavana sy fitondrana vahaolana, satria raha ny zavatra misy eran-tany dia tena manjaka ny valanaretina, ka omanina ny fisorohana ny loza izay mety ho tonga eto amin’ny firenentsika.
Nitondran’ny Praiminisitra fanazavàna ny fisehon’ny valanaretina any Eoropa sy Afrika, ka nanamarihany fa raha oharina amin’izany ny eto Madagasikara dia manaporofo ny vokatry ny ezaka nataon’ny Malagasy hatrizay, izay tsapa fa nitondra tombontsoa na dia maro aza ny lavo teto amin’ny firenena. Ezaka niombonan’ny olom-pirenena rehetra tao anaty faharisihana sy fitiavan-tanindrazana no nambarany, saingy teo no nosinganiny manokana tamin’ny alalan’ny fanehoana ny fahafaham-pony ireto mpiara-miasa taminy: nomarihiny fa mahafehy ny asam-panjakana tokoa izy ireo, ary ny asam-panjakana no ahafahana mandrefy ny ezaka vita. Nanaiky sy nanaja tanteraka ny fepetra rehetra noraisina teo anivon’ny Primatiora momba ny fivezivezena amin’ny fikarakarana taratasy, nisorohana ny fihanaky ny covid-19, ny mpiasa rehetra, hoy ny Praiminisitra. Notsindriany manokana fa tao anatin’ny mangarahara tanteraka no nanazavany tamin’ny olona rehetra ny zava-nisy teto amin’ny tany sy ny fanjakana.
Na tao anatin’ny fety aza dia tsy hadinon’ny Praiminisitra ny nampahatsiahy fa betsaka ireo Malagasy no miaina ao anaty fahasahiranana tanteraka, isan’izany ny olona iharan’ny kere izay miseho any amin’ny faritra atsimon’i Madagasikara.
Teo am-pamaranana ny fandraisam-pitenenana nataony dia namerina fisaorana ary nirary soa ho an’ny vahoaka Malagasy manontolo ny Praiminisitra, ny amin’ny nandraisan’izy ireo andraikitra tao anatin’ny ady tamin’ny covid-19 izay mbola mitohy hatramin’izao, ary nanentana ny rehetra mba hanohy ny ezaka tandrify ny tsirairay amin’izany ady izany satria tsy fantatra, hoy izy, izay mety mbola hiandry ny firenentsika amin’iny taona 2021 ho avy iny.
← Fitsidihana ara-pomba fifanajana roa sosona
Conseil du gouvernement du Mercredi 06 Janvier 2021 →